Taariikh Nololeedkii Alle Ha U Naxariistee Cabdi Ibraahim Waqooyi | WWW.SOMALILAND.NO
Taariikh Nololeedkii Alle Ha U Naxariistee Cabdi Ibraahim Waqooyi
Posted on Maajo 9, 2008 by weriye1
Alle Ha U Naxariistee, waxa maalintii Arbacada ee May 7, 2008 (1:00 PM) ku xijaabtay caasimadda Somaliland ee Hargeysa, Badhasaab Cabdi Ibraahim Waqooyi, oo xilalkii u dembeeyey ee uu qabtay ahaayeen Badhasaabka gobolada Sanaag, Togdheer, iyo Maroodi Jeex.
Cabdi Ibraahim Warsame (Waqooyi) wuxuu ku dhashay hawdka degmada Oodweyne, sannadkii 1941. Aabbihii, Ibraahim Warsame (Ibraahim Waqooyi) wuxuu xilligaas ka mid ahaa bileyskii British Somaliland. Hooyadiina waa Faadumo-Siraad Xirsi-Adar Axmed.
Sannadkii 1949 ayuu Cabdi Ibraahim ku biiray Dugsiga Tababarka Bileyska ee Mandheera (Mandera Police Training School), isagoo ka mid noqday dhallinyaridii loo yiqiinnay Boys Brigade (Boos-birgeydh) ee loo tababari jiray inay noqdaan saraakiil- xigeenno bileys ah (Uncommissioned Officers or NCOs).
Sannadkii 1959, ayuu Cabdi dhammeystay waxbarashadii Dusiga Bileyska (oo u dhigantay fasalka “Standard 7”, oo xilligaas ahayd waxbarasho heer sare ah).
Markaas ka bacdi wuxuu ku biiray ciidanka bileyska ee magaalada Hargeysa oo uu ka noqday dembi-baadhe. Cabdi wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo firfircoon oo shaqadiisa dembi-baadhista aad loo jecel-yahay loona ammaano. Taasi waxay keentay inuu noqdo dembe-baadhihii loo diray magaalooyinka Laas-Caanood iyo Boosaaso inuu u soo baadho dilkii Madaxweyhii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke (Alle Ha U Naxariistee) ee dhacay Oktoobar 15, 1969. Taasi waxay dhalisay in kiiskii uu Cabdi soo diyaariyey lagu qisaaso ninkii Madaxweynaha toogtay ee lagu naaneysi jiray “Jahannamo”.
Sannadkii 1976, isagoo darajadiisu tahay Kormeere Labaad (Inspector) ayuu Cabdi ku guleystay imtixaan guud oo laga qaaday kormeerayaasha bileyska oo loogu tartamayey darajada Xiddiglaha ah (Sub-Lieutenant). Isla sannadkaas ayuu ku xarooday Dugsiga Bileyska ee Muqdisha (Scola Polizia), halkaas oo uu ku qaatay leylis sarkaalnimo (officer cadet training), markii dembena uu ku guuleystay inuu noqdo Sarkaal Idman (Commissioned Officer or CO) oo uu ku qaato darajada Xiddiglaha. Muddo yar ka dibna waxa loo diray Dagaalkii 1977, halkaas oo uu si geesinimo leh u hoggaamiyey hurintii uu madaxda u ahaa, nasiib wanaagna uu nolol kaga soo noqday.
Sannadkii 1978, ayaa Cabdi isagoo Dhamme ah (Captain) loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka illaalinta cashuuraha ee dekedda Berbera, halkaas oo uu ku sugnaa illaa sannadkii 1982 markaas oo loo beddelay dekedda Kismaayo. Intuu joogay dekedda Kismaayo, wuxuu Cabdi gaadhay darajada Korneel (Colonel).
Hase ahaatee, markii xaaladdii siyaasadeed ee dalku sii xumaatay, ayaa taliskii dawladdii milatariga ahayd ku eedeysay Korneel Cabdi Ibraahim Waqooyi innuu ka mid ahaa dadkii lagu tuhunsanaa inay ka mid ahaayeen SNM. Sannadkii 1986 ayaa Korneel Cabdi Ibraahim Waqooyi iyo saaxiibkiisii laxmiga ahaa Korneel Cabdillaahi Cali Xidhane iyo saraakiil kale oo badan loo taxaabay jiilkii loo yiqiinnay “Laanta Buur ” ee u dhawaa magaalada Afgooye.
Cabdi iyo asxaabtiisii kale ee Reer Somaliland waxay jeelkaas ku jireen illaa sannadkii 1989, markaas oo uu Xeer Ilaaliyihii Soomaaliya dib ula noqday dembiyadii lagu soo oogay raggaas. Waxa xusid mudan, in Xeer Ilaaliyahaas sii daayey Cabdi iyo raggii kale ee la xidhnaa uu ahaa Nuur Xasan Xuseen (Nuur-Cadde) oo maanta ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya. Malaha waxa uu Nuur-Cadde arkay gardarradii raggaas lagu xidhxidhay.
Sannadkii 1991, intaan Maxamed Siyaad Barre ka bixin Xamar, ayuu Cabdi goostay inuu reerkiisii iyo dadkii kale ee ka ag-dhawaa ka saaro magaalada Muqdisha. Cabdi iyo kolanyadii Reer Somaliland ee qaxootiga ahayd ee uu hggaaminayey waxay ku qaadatay muddo bil ku dhow inay ku soo gaadhaan magaalada Gaashaamo. Sidaas baa dad badan naftoodii ku badbaaday oo Illaahay Cadbi shinbir uga soo dhigay.
Dagaalkii sokeeye ee Somaliland, Cabdi wuxuu u qaxay magaalada Oodweyne, halkaas oo fadhigiisu ahaa tan iyo intii colaaddu dhammaaneysay. Markaas ka dib ayuu ku laabtay gurigiisii Hargeysa. Isla muddu yar ka dib ayaa Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal (Alle Ha U Naxariistee) u magacaabay inuu Cabdi noqdo Badhasaabka Gobolka Sanaag ee fadhigiisu yahay magaalada Ceergaabo. Wuxuu haddana Cabdi Badhasaab ka soo noqday Magaalada Burco, Gobolka Togdheer. Ugu dembeyntiina wuxuu Cabdi Badhasaab ka noqday magaalada Hargeysa, Gobolka Maroodi Jeex.
Badhasaab Cabdi Ibraahim Waqooyi wuxuu xilka ka fadhiistay oo uu hawl-gab noqday sannadkii 2002. Muddadii intaas ka dembeysay wuxuu ka mid ahaa odayaasha aad loo qaddariyo ee sama-taliska ah.
Alle Ha U Naxariistee, Badhasaab Cabdi Ibraahim Waqooyi wuxuu ifka kaga tagay xaas (Hodon Aw-Maxamed Xirsi) iyo 8 wiil iyo hal gabadh iyo 7 carruur ah oo ay sii dhaleen. Waxa kale oo Cabdi ka hadhdhay hooyadii Faadumo-Siraad Xirsi-Adar iyo 4 nin iyo 5 haween ah oo walaalihiis ah.
Waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan Reer Ibraahim-Waqooyi iyo Reer Xirsi-Adar meel kasta oo ay dunida joogaan.
Ayanleh I. Farah, M.A., M.Ed.
For comments, write to:
« Munasabada 18 May Oo Si Weyn Looga Xusi Doono Oslo ROOB AAD LOOGU DIIRSADAY AYAA KA DA’AY Galbeedka Gobolka Hargeisa iyo Gobal weynaha Gabiley (Qodaal) »